I-Ministries ye-Intanethi - Izibonelelo
Ndiyabulela ngokutyelela kwiziko lethu lamaKristu. Leli phepha lendalo lenziwe ukuze kuzuze onke amaKristu kunye nalabo bafuna ukwazi ngakumbi ngeNkosi. Sifake uluhlu lwemithombo ye-intanethi ye-intanethi eya kulungiselela ukuxhobisa abangcwele kubulungiseleli ngokusebenzisa ulwazi lweLizwi likaThixo. Zonke iiNcwadi zamaKristu kunye neencwadi ezipapashwe kule candelo ziphantsi kwaye ziqhutywe ngamalungu amabandla kaKristu.
Kwimenyu ephezulu echazwe ngasentla ungakrafa kwiyiphi na ikhonkco efumaneka kwi "Resources" ithebhu ukufumana uncedo lwe-intanethi kunye namanqaku anomdla.
Kuvuyisa kunye nentsikelelo yokukhonza iicawa zikaKristu kunye nehlabathi kwi-intanethi ngeendaba ezilungileyo zikaYesu Kristu iNkosi. Silindele ukukhonza. Kwangathi ubabalo lukaThixo, uthando lukaYesu, noxolo loMoya oyiNgcwele lube kunye nawe kunye nosapho lwakho ngonaphakade.
Ngaba icawa okanye inkonzo yakho idinga iwebhusayithi?
Sinokukunceda. I-Intanethi yeWebhu yeWebhsayithi kulula ukuyisebenzisa kwaye ikhululekile ukuyisebenzisa kunye naziphi na izicwangciso zethu zokubamba ngewebhu. Ukuba kuyimfuneko sinokuyila iwebhusayithi yeprofesenti ngexabiso eliphantsi. Cofa apha okanye kwi-Website logo ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu.